Author: Moogugul Tojalabar
Awoodaha Maxkamadda Dastuurka 1 Maxkamadda Dastuurku waay yeelaneysaa awoodahan u garrka ah: Calanka iyo Astaanta Qaranka Durid Sharci 1 Sharci maray habraaca ansixinta sharciyada iyo dhaqangeliddaba waxaa lagu duri karaa oo keliya inuu ka soo soojaaliya Dastuurka. Iyadoo la tixraacayo Dastuurka, Guddiga Xuquuqda Aadmiga, wuxuu yeelahanayaa awood uu ku fuliyo hawlahan: Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Adstuurka jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Haddii Baarlamaanka Federaalka uusan oggolaan ama soomaalkya waqti ku darin xaalad degdeg ah, markaa xaaladda degdegga ah ma jireyso. Magacaabidda Guddiyada Heer Federaal December 17, Notify me of new posts by email. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Magacaabista Saraakiisha Darajooyinka Sare Hawlwadeennada iyo Saraakiisaha darajooyinka sare ee Dawladda uu sharcigu tilmaamo waxaa magacaabaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ka dib markuu arko soo jeedinta Golaha Wasiirrada.
Qodob kale oo Warar ah. Xildhibaannadii golaha shacabka ee 9-kii bishan keenay mooshinka xil ka qaadista madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta ku celiyey in sidiisii u jiro mooshinka, iyaga oo madaxweynaha u soo jeediyey inuu u hoggaansamo sharciga. Gudniinka gabdhaha waa reeban yahay. Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee Ka jira Soomaaliya Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana sooomaaliya hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare soomaakiya joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Xilka Xeerdejinta ay wadaagaan labada Gole Xilka sharci-dejinta ee ay wadaagaan labada gole waxaa ka mid ah: Dastuurkan KMG ah inkasta oo aan loo codeyn, kuma xusna sida ay noqoneyso xaaladda madaxweynaha iyo waxa ku dhacaya awoodahiisa, laakin dastuurkii kii ayaa arrintaas ka hadlay.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.
Xubnaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka. Xorriyadda Kulanka, Bannaanbaxa, Cabashada iyo Codsi-wadareedka Xorriyadda Diinta iyo Caqiiddada 1 Qof kastaa wuxuu xor u yahay in uu ku dhaqmo diintiisa. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Shuruucda ku saabsan Xisbiyada, Diiwaangelintooda, Doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo Guddiga Qaranka ee Madaxbanaan ee Doorashooyinka, waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo uu soo saaro Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Waajibaadka Muwaaddinka 1 Sida Diinta Islaamku qabto, caddaaladda waxay ku jirtaa isu-dheellitirnaanta xuquuqda iyo waajibaadka.
Gacanka Cadmeed; b Waqooyi Galbeed: Xubnaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalaynta; 5.
Maxkamadeynta iyo Maamus-Ka-qaadista Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Xil-ka-qaadidda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa soo jeedin kara Golaha Shacabka marka lagu eedeeyo khiyaano-qaran, xadgudub culus oo Dastuuri ah ama ku-xad-gudub sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dastuurkani wuxuu asaasayaa Golaha Adeegga Garsoorka. Qaybaha ku dabaqma wax ka beddelka Dastuurka ee lasoo jeediyay ka hor inta aanay dhammaan muddada koowaad ee wakhtigaBaarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya: Golaha Wasiirrada 1 Awoodda fulinta ee Jamhuuriyadda Federaalka ah waxaa leh Golaha Wasiirrada, waxayna u qabanayaan sida Dastuurka ku tilmaaman.
Dastuirka wax ka bedelka Dastuurka inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Dastuur kama dambays ah 1 inta lagu guda jiro muddo xileedka koowaad ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya, baarlamaanka Federaalku waxaa uu qaadan doonaa waxkabeddelka la soo jeediyay ee Dastuurka ku meel gaarka ah somaaliya intii lagaga ansixiyay kadib cod kama dambays ah aqalka shacabka codkaasoo u dhigma sadex meeloodow laba meeloodiyo cod kama dambaysa ah oo ay u qaadaan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah, codkaasoo somoaaliya yaraan ah sadex meeloodow laba meelood xubnaha jira.
Wuxuu kaloo xor u yahay in uusan cidna ku biirin, lagumana qasbi karo inuu cid kale ku biiro. Xorriyadda iyo Nabadgelinta Qofnimada 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga ah iyo nabagelyada qofnimadiisa.
Xaqa Ka-qaybgalka Siyaasadda 1 Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha. Sidaas darteed, muwaaddin kasta waxaa waajib ku ah in uu: Golaha amaanka ee qaramada midoobay soomxaliya cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah.
Kheyraadka Osomaaliya ah Qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka wada xaajoon doona Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladaha Xubinta ka noqon doona Dawladda Federaalka Soomaaliya iyadoo loo marayo qaab Dastuuri ah. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah wuxuu leeyahay awood sharci- dejin oo ah: Xildhibaannada mooshinka keenay, waxaa ay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen: Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Xorriyadda Diinta iyo Caqiiddada Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada Xasaanadda Xildhibaannada Golaha Shacabka
Previous Post AN OUNCE OF CURE BY ALICE MUNRO PDF
Next Post ACCIDENTAL TEXTING KIMBERLY MONTAGUE PDF